Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara Montes de León na geology | Netwọk Mgbasa Ozi
na Montes de León Ha bụ ugwu di iche-iche nke na eme dika ihe jikotara North Submeseta, Galaico Massif na Ugwu Cantabrian. Dịka ebe ndị ọzọ dị na Spen, Montes de León bụ ebe ndị njem na-ewu ewu n'ihi akụ na ụba ha. O nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọnụ ọnụ na ugwu ndị kwesịrị ileta.
N'ebe a, anyị ga-akọwa nke ọma ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Montes de León na njirimara kachasị mkpa nke elu ọ bụla na ugwu ọ bụla.
1 Njirimara nke Montes de León
2 Ugwu Aquilian
Njirimara nke Montes de León
Ugwu ndị a bụ akụkụ nke nkwado nke ntọala nke bụ akụkụ nke ndị Iberia massif. Ezigbo okwu a na-enye akụ na ụba a niile. Ugwu o nwere bu ugwu di elu, ma elu ya adighi ekwuputa nke ukwuu. A na-akpọ ụdị ugwu ndị a nwere elu ọnụ nro dị iche iche. Ugwu nwere elu kachasị elu bụ mita 2.000. Ozi ọma ahụ bụ na ọnụ ọnụ ugwu ndị a gbara ndagwurugwu a na-akpọ Bierzo gburugburu. Olulu a nwere ihe ndị sitere n'ugwu Sil River nke emebiworo.
Isi elu ya bụ Teleno ma ọ nwere elu dị elu nke mita 2.188. Na Montes de León, mbuze nke ice na ikuku emeela kemgbe ọtụtụ nde afọ. Nke a emeela ka imepụta ihe enyemaka dị iche iche. A maara ya dị ka enyemaka enyemaka glaasi kachasị na Spain ma dị na mpaghara Ọdọ Mmiri Sanabria.
Ugbu a, anyị ga-enyocha njirimara ndị bụ isi nke nnukwu ugwu na ugwu ya.
Ọ bụ usoro ugwu dị n'ime Montes de León. Ọ dị na mpaghara El Bierzo. Osimiri Cabrera pụtara na mkpọda ya ndịda, Oza na mkpọda ugwu na osimiri Compludo. Ọ bụ mpaghara kachasị echekwa ma mmiri mmiri dị ọcha na n'efu ka aka madu metuworo. N'ihi ịdị adị nke osimiri ndị a, ọ ga-ekwe omume ịdị adị nke oke osimiri dị iche iche, yana nnukwu osisi.
Oké ọhịa ndị na-esote n'akụkụ osimiri nwere ụdị oak, holm oaks, chestnuts na reboñales. N'etiti ụmụ anụmanụ, ugo ọlaedo, nkịta ọhịa, otter na desman pụtara.
Ugwu ndị ahụ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 2.000 n’ogologo. N'ime ha bụ Monte Irago, Pico Becerril, Cabeza de la Yegua, Pico Berdianías, Meruelas, Llano de las Ovejas, Funtirín, Pico Tuerto, Cruz Mayor, Pico Tesón na La Aquiana.
Ọ bụ ugwu ugwu nke Montes de León. N’ugwu a bụ osimiri Jares na Bibey na Esla cenca na osimiri Tera. Na ihe omuma ya anyi choputara ihe di nkpa nke oge ice nke di na Quaternary na nke ka akara na nkume. Ejiri ugwu kpuchie ugwu n'oge ice. Layersdị oyi akwa a nke ọtụtụ narị mita ice anọwo na-arụsi ọrụ ike ma jisie ike gwupụta ebe mmiri dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri Sanabria. Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke kachasị pụta bụ Moncalvo nke dị elu nke 2.044 mita.
Mpaghara a nwere ihu igwe nke oge oyi ya bu ezigbo oyi ma ebe mmiri ozuzo di elu na snowy. Okpomọkụ na ụbọchị kachasị oyi nwere ike iru ogo -20. Ha nwere oke mmiri blizzards nke mmiri na snow na winters na udu mmiri dị mkpụmkpụ, mana nwere obi ụtọ na okpomọkụ. N'oge opupu ihe ubi na oge mgbụsị akwụkwọ, ọ na-abụkarị ọtụtụ iru mmiri, foogu na ụbọchị mmiri ozuzo.
Banyere ahịhịa ya, anyị na-ahụ akụnụba dị egwu na ụdị ahịhịa dịka: bramble, heather, broom, oak, birch, hazel, alder, ash, holly, rowan, yew and chestnut. O nwekwara ọnụnọ buru ibu nke nwere ọtụtụ anụmanụ nwere ụdị dị ka mgbada ele, anụ ọhịa ọhịa, otter, badger, polecat na wolf, n'etiti anụ ọhịa ndị ọzọ.
Ọ dị n’agbata ógbè Leọn na Zamora. Ugwu ugwu dị n'etiti mpaghara Sanabria na La Carballeda. Ha niile na - etolite na Montes de León massif tinyere ọnụ ọnụ ugwu na ugwu ndị ọzọ.
Ọ bụ otu n'ime ebe glacierism bụ isi dị na Quaternary na ala anyị. Glaciers malitere na nzukọ ebe asụsụ nke ice rida. N'ihi ya, ha nwere nnukwu ọdọ mmiri dịka Baña, Truchillas na Sanabria.
Ọnụ ọnụ ugwu ndị ahụ na-adịkarị ihe dịka mita 2.000 n'ịdị elu o nwekwara ihu igwe ugwu nke ejiri otutu oge na otutu oge oyi. Frosts ke ini etuep na-enwekarị ike esonyere blizzard jiri mmiri na snow. Mpaghara kachasị elu bụ nnukwu mbara igwe nke snow na ice.
Nchịkọta na-enwe obi ụtọ karịa ọnọdụ okpomọkụ mana ha dị mkpụmkpụ. Igwe kachasị elu anaghị agafe karịa mgbe ụfọdụ karịa ogo 30. Ọ bụ eziokwu na abalị na-ajụ oyi karịa. Na ebe nchekwa snow ha na-adịgide na nzukọ. N'ihi idi nso ya na Atlantic Ocean, enwere oke mmiri ozuzo na nkezi kwa afọ site na 1.200 mm na 1.800 mm. N'oge ọkọchị, ọ nwere mkpụmkpụ oge mkpụmkpụ.
Ọ bụ ugwu ugwu nke dị na northwest nke mpaghara Zamora na obodo kwụ ọtọ nke Castilla y León.
Ihu igwe nwere ya bụ ụdị ala kọntinent. Anyị na-ahụ onwe anyị oyi na ogologo oge oyi nke okpomọkụ ya na-erughị ogo 10. Ntu oyi na fogs na-emekarị, ọ bụ ezie na ndị a ruo n'ókè. Oge okpomọkụ dị mkpụmkpụ ma na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ karịa ogo 20. Enwere ọnọdụ ikuku pụtara nke ọma n'etiti ehihie na abalị. Ọ pụtara, ụbọchị na-ekpo ọkụ ma abalị na-ajụ oyi n’agbanyeghị na ọ bụ n’oge ọkọchị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Montes de León jupụtara na ọnụ ọnụ na ugwu ebe anyị na-ahụ ihu igwe mara mma yana ọtụtụ ụdị dị iche iche. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịnụ ụtọ ebe ndị a karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Montes de León